Semalt: Inkqubo Eyona Nzulu Ephandwayo yophando eya Kukhokelela abaninzi abathengi
Le mihla, abathengi bangempela bathengisa amaqhinga acacileyo kunye nezibonelelo ezihlaziyiweyo, ngaphandle kokunciphisa umgangatho kunye nokuthembeka. Xa uqala ukukhangela idatha kwi-intanethi, izinto zizinzileyo ngokuzenzekelayo. Kukhuselekile ukutsho ukuba uphendlo lwegama eliphambili lungaheha abathengi abaninzi. Kungenxa yokuba, kunye nalo, ufumana ingcamango yento abathengi bakho abayifunayo nendlela yokuza kulindela. Nangona iiprogram zokukhangela ezihlawulwayo zifunekayo, uphando olunzulu lwegama elingundoqo lunokukunceda ngeendlela ezininzi. Iyakwazi ukuguqula iindwendwe zakho zibe ngabathengi kwaye inokukunceda ukwandisa ukuthengisa kwakho kwizinga eliphezulu.
UJason Adler, uMphathi weNtengo kaMthengi we-12 (Semalt , uchaza apha imiba ephambili yokuphumelela kwinkqubo yophando ngegama elingundoqo
Igama elingundoqo elithi Evolution
Okokuqala, kufuneka uhlaziye kwaye uvavanye amagama akho angundoqo ukuze ukhangele ukuba zilungile ukuhamba okanye cha. Kubalulekile ukuba sonke senze uludwe lwamagama angundoqo anokuthi afanelekileyo kumashishini ethu. Njengoko Ii-injini zokukhangela zilwela amagama angundoqo ahlawulayo, ngoko ke kufuneka ube nolwazi olunjalo malunga naloo nto kwaye uyazi ukuba yeyiphi iikowedi eziza kucofa kwaye zikhangelwe kakhulu. , kwaye amathuba akho okuphumelela aphezulu kwi-intanethi. Ukongeza, kufuneka uhlale ucinga uphando lwezwi ukwazi indlela yokukhulisa ishishini lakho kwaye ufumane ezininzi zezithuthi. Ngeengxoxo, unokutsala abantu abaninzi nakwiziko lakho okanye kwintlalo Iiprofayili zeendaba, ukulandelela iirekhodi zabo zangaphambili kunye nokuzibandakanya kwiimveliso kunye neenkonzo zakho. Abaninzi bethu basigxina ukuvavanya kwegama elingundoqo xa senza ezi zinto, kodwa akufanele ungakuhoyi ukuba uzimisele ukuqhuba nokukhupha ishishini lakho kwi-intanethi.) U
Yazi Abantu Abajongene Nalo
Unayo ingcamango yabaphulaphuli bakho? Yazi abantu ofuna ukujolisa kunye neendawo zabo. Ngokomzekelo, ukuba uneblogu, ukubhala amanqaku kuma-Asiya, ngoko kuyacaca ukuba abaphulaphuli bakho babeza kuhlala eIndiya, ePakistan, eChina, eThailand nakwamanye amazwe afanayo. I-SEO yindlela ebalaseleyo yokukwazi ukuba ngubani oza kujolisa kunye nendlela yokusebenzisa amagama asemgangathweni kunye namabakala malunga nalokhu. Sebenzisa amacebiso kunye nengxelo yengcali zeengcali kwaye ufunde indlela abathengi bakho abasabela ngayo kwimveliso kunye neenkonzo zakho.
Yiya ngaphaya kweZiko eliphambili legama eliqhelekileyo
Kumele uhambe ngaphaya kwamathuluzi egama elingundoqo lokufumana umsebenzi wakho ngokufanelekileyo. Kufuneka ukuba usebenzise amathuluzi okuphanda amagama angundoqo kwaye usebenzise ezininzi zeenkqubo ukukhangela amagama angundoqo. Akunjalo kuphela amagama angundoqo kodwa kwakhona amagama kunye namagama afanelekileyo kufuneka asetyenziswe ukwenza umsebenzi wakho uyenze. Awufanele ulibale malunga nezixhobo ezingezizo-ezibonakalayo ezinokukunceda ukufezekisa iziphumo ezifunwayo kwiiveki ezimbalwa. Umzekelo, i-Demographics Pro iye yenzelwe ukunika abasebenzisi ingqiqo yokuba ngubani ophangela iimveliso zabo nendlela yokufumana uhlobo olufanelekileyo lwabathengi kwi-intanethi. Kukho ezininzi zezixhobo ezinokusetyenziswa ukubandakanya inani elikhulu labantu. Ezi zixhobo zikubeka endleleni efanelekileyo, kwaye unokwakheka lula amagama kunye namagama angundoqo abathengi bakho abanokuthi banomdla kuzo.